Duufaanno hor leh oo ku soo socda xeebaha Somalia oo la shaaciyey - Caasimada Online
Home Warar Duufaanno hor leh oo ku soo socda xeebaha Somalia oo la shaaciyey
Duufaanno hor leh oo ku soo socda xeebaha Somalia oo la shaaciyey
Muqdisho (Caasimada Online)-Waxaa sii kordhaaya digniinada laga soo saarayo duufaanno hor leh oo ku soo fool leh xeebaha waqooyi Bari ee Puntland.
Duufaanada kusoo fool leh xeebaha waqooyi Bari ee Puntland, ayaa la xaqiijiyay inay ka soo kacayaan gudaha badweynta hindiya, kuwaasoo khatar ku haya qaar ka mid xeebaha Puntland.
War saxaafadeed ka soo baxay Xarunta Saadaasha Cimilada ee urur-goboleedka IGAD ayaa waxaa Puntland looga digay Duufaanada kusoo fool leh xeebaheeda.
IGAD, waxa ay digniinteeda ku aadan Dufaanta ku sheegtay xaalado isa sii taraysa oo loo baahan yahay in mar waliba ay ka feejignaato Puntland.
Qaybo ka mid ah duufaannadan oo ay la socdaan daruuro iyo roob ayaa la saadaalinayaa inay ku dhufan doonaan xeebaha Soomaaliya sida ay sheegtay IGAD, iyadoo wadarta biyaha roobabkaasi lagu qiyaasay 30-MM.
Si kastaba ha ahaatee, Roobab watay Duufaano oo bilowga asbuucaan ku dhuftay deegaanada Puntland ayaa waxaa ku dhintay dad u badnaa xoolaaleey, halka duunyo badan ay ku burbureen dabeylaha.